१० एमडब्ल्यू एफएम ट्रांसमिटर - CZH / Fmuser एफएम ट्रांसमीटर चीन आपूर्तिकर्ता सम्पर्क: lanyue whatsapp: +10 86 स्काइपी: lanyue13602420401
घर » 10mW एफएम ट्रांसमीटर
10 XNUMXmW एफएम ट्रांसमीटर ~
- पहिलो चरण-
यो एफएम ट्रान्समिटर समग्र stages चरण W वाट एफएम ट्रांसमिटरको पहिलो चरण हो।
... अक्टुबर th०, २००२ को रूपमा अद्यावधिक गरियो
तपाइँको खुट्टा भिजेको
यदि तपाईंले पहिले कहिल्यै एलपीएफएम (कम-संचालित फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेटेड) ट्रान्समिटर बनाउनु भएको छैन भने, यस प्रोजेक्टबाट सुरू गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ... तपाईको पहिलो एफएम युनिट बनाउनमा के राखिएको छ भन्ने ज्ञान हासिल गर्न .. र 'हातहरू' पनि लिन सक्नुहुन्छ। -on 'अनुभव। यद्यपि १० मेगावाट एफएम ट्रान्समिटर एक धेरै साधारण प्रोजेक्ट जस्तो देखिन्छ जस्तो कोहीले भन्छन कि, सबै कुरा 'ठीक' हुनेछ भन्ने सोचाइमा मूर्ख नबनाउनुहोस्। यस प्रोजेक्टमा शब्द 'सरल' भनेको मात्रै हो कि समग्र परियोजनामा ​​तुलनात्मक रूपमा केही कम्पोनेन्टहरू छन् अन्य LPFM इकाईहरूको तुलनामा। 'सरल' शब्दको मतलब यो होइन कि एकाई ठीक र ड्यान्डि काम गर्दछ जब तपाईं यसलाई पूर्ण गर्नुभयो। यो अझै पनी गाह्रो हुन सक्छ इकाई सही काम गरीरहेको छ… वा त्यो कुराको लागि… सबैमा .. जब तपाइँले अन्ततः बोर्डमा सबै कम्पोनेन्टहरू सोल्डर गर्नुभयो र यसलाई खोल्नुभयो। धेरै भेरिएबलहरू vhf अखाडामा काम गर्ने खेलमा आउँदछन्। उच्च एक आवृत्ति मा जान्छ, अधिक 'स्पर्श' यी एकाइहरु हुन्छन्। मैले १० मेगावाट युनिट बनाउन चरणबद्ध चरण दिएँ। यस प्रोजेक्टमा अधिक महत्त्व प्रत्येक कम्पोनेन्टमा सत्य रहनु हो ... अर्थात, प्रतिस्थापनको लागि अनुमति दिइनु हुँदैन। म दृढताका साथ सुझाव दिन्छु कि तपाईंले सूचीबद्ध गर्नुभएको प्रत्येक 'घटक' प्रयोग गर्नुहोस् ... र त्यसबाट तर्केर नजानुहोस्। यदि तपाईं यो इकाई बनाउने मेरो सटीक तरीकाको पालना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अन्तमा यसले काम गरिरहने सम्भावनाहरू निश्चित रूपमा धेरै धेरै हुनेछन्। र यदि तपाईंले धैर्यतालाई नजिक राख्नुभयो भने ... तपाईंले सम्भवतः एकाईको उत्तम प्रदर्शन गरेको देख्नुहुनेछ! एकचोटि तपाईंले एकाई राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो र आफ्नो रुचि अनुसार ... तपाईं त्यसपछि दोस्रो चरण थप्न सक्नुहुन्छ… २०० मेगावाट युनिट र त्यसपछि तेस्रो, जुन w वाट युनिट हो। म यस बुद्धिमानी निर्णय लाई तथ्यमा प्रस्ताव गर्दछु कि मैले तीनै जना बनाएको छु ... र पहिलोबाट सुरू गर्नु राम्रो कुरा हो!
If तपाईं यी LPFM ट्रान्समिटरहरू बनाउनेसँग परिचित हुनुहुन्छ र उनीहरूसँग राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईं केवल १०mW माथि जान सक्नुहुन्छ र २००mW वा wat वटरबाट सुरू गर्न सक्नुहुन्छ ... यो सबै तपाईंमा निर्भर छ। तर म भन्छु, जसले यी तीन ट्रान्समिटरहरू बनाएको छ ... शुरुआतबाट सुरु गर्नु धेरै बुद्धिमानी हुनेछ (जुन, १० मेगावाट युनिटबाट सुरू गर्दैछ), र त्यसपछि अर्को ट्रान्समिटरमा तपाईंको तरिकाले काम गर्नुहोस् ... ह्यान्ड्स-अन अनुभव अहिलेसम्म संसारको सबै भन्दा राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ!
Sओ, अब मेरो साथी, तपाईंसँग छनौट गर्न एफएम ट्रान्समिटरको choices विकल्पहरू छन्: १० मेगावाट, २०० मीडब्ल्यू वा W वाट।
These तीन एफएम ट्रांसमिटरहरू सबै यस वेबसाइटमा छन्। त्यसो भए थप एडो बिना, म यी राम्रो एफएम ट्रान्समिटर परियोजनाहरू आत्मसमर्पण गर्छु जसले बाहिर उद्यम र यसलाई बनाउन छनौट गर्छन्।
... र प्रोजेक्ट सुरु हुन दिनुहोस्!
दस मिलिवाट एफएम ट्रांसमिटर
Tउसको प्रकारको पीसीबी style वाट एफएम ट्रान्समिटरमा प्रयोग गरिएको समान शैलीको हो। W वाट वेबपेजमा डिजिटल स्न्याप शट हेर्नुहोस्। त्यो तस्विरमा ध्यान दिनुहोस् ... सबै कम्पोनेन्टहरू जुन कि तामामा सोल्डर गरिएको छ ... दुबै कम्पोनेन्ट र कॉपर पीसीबीको समान पक्षमा छन्। मैले यो शैली प्रयोग गर्ने निर्णय गरें किनकी यसलाई परिवर्तन गर्न एकदम चाँडो र सजिलो थियो… प्रयोगका धेरै महिनाहरूमा। त्यसो भए, PCB मा ड्रिल हुन कुनै प्वालहरू छैनन्, चार माउन्टिंग प्वालहरू बाहेक। तल १०mW पीसीबी टेम्प्लेटलाई हेर्दा, त्यहाँ १२ तामा टापु छन् (सुन्तला रंगको शेड) क्षेत्रहरू, जुन सेता क्षेत्रले घेरिएको छ। यी सेता क्षेत्रहरू छन् जहाँ त्यहाँ कुनै 'तामा' छैन। यो तपाईको पीसीबी बनाउने तरिका हो। मैले यो शैली को उपयोग मा महान परिणामहरु छन्। एकचोटि तपाईंले यो काम गरिसकेपछि, तपाईं अर्को पीसीबी बनाउन चाहानुहुन्छ ... प्वालहरू सहित ... तपाईं जे मनपर्नुहुन्छ। तर मेरो 'कडा' सुझाव भनेको तपाईं मेरो निर्देशन अनुसार 'पहिलो' पीसीबी गर्नुहोस्। तपाईं अन्त मा एक राम्रो कार्यक्रम को लागी वारन्ट हुनेछ!
Go अगाडि बढ्नुहोस् र माथिको पीसीबी टेम्प्लेटको प्रतिलिपि प्रिन्ट गर्नुहोस्। यो mm ० मिलिमिटरमा 91 १ मिलिमिटरको हुनुपर्दछ। यदि होईन भने, रेखाचित्रलाई एक ग्राफिक्स कार्यक्रममा पठाउनुहोस् र निचोड़ गर्नुहोस् र / वा स्ट्रेच गर्नुहोस् जबसम्म उचित मापन प्राप्त हुँदैन। एक चोटि यो काम सकिसकेपछि, तपाईं आफ्नो पीसीबीलाई उस्तै टेम्पलेटमा जस्तो देखिने बनाउनुहुन्छ। मलाई फेरि भन्न दिनुहोस् ... त्यहाँ १२ टेम्पर टापुहरू छन् (जहाँ तपाईं रंग र orange्ग देख्नुहुन्छ) माथिको टेम्प्लेटमा। यी टापुहरूको वरिपरि कुनै तामाको क्षेत्रहरू छैनन् (जहाँ तपाईं रंग सेतो देख्नुहुन्छ)। मेरो भनिएको शैली प्राप्त गर्न माथिको टेम्प्लेट सकेसम्म राम्ररी नक्कल गर्नुपर्दछ।
Wहेन तपाईंले पूरा गर्नुभयो र तपाईंको नयाँ 'अचूक' पीसीबी समाप्त गर्नुभयो, एउटा प्वालमा ड्रिल गर्नुहोस् जहाँ सानो कालो वर्ग टेम्प्लेटमा छ। त्यसपछि प्वालको १ solid गेज ठोस तामाको तार छेद गरी पीसीबीको फ्रन्टसाइड र ब्याकसाइडमा तार मिलाप गर्नुहोस्। त्यसपछि अधिक काट। यसले पीसीबीको पछाडि आवश्यक भुमि विमान (जुन पीसीबीको फ्रन्टसाइडमा छ) जारी राख्दछ।
Once that done… तपाईं सुरू गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ र पीसीबीमा तपाईंको कम्पोनेन्टहरू सबै मिलाप गर्न। सबै कम्पोनेन्टहरू दुई कुण्डल बाहेक ठाडो 'स्ट्यान्डिंग अप' स्थितिमा सोल्डर हुन्छन्। कम्पोनेन्टहरू पीसीबीमा कहाँ अवस्थित छन् भनेर हेर्न तल हेर्नुहोस् ...
कम्पोनेन्ट प्लेसमेन्ट गाइड
J'कम्पोनेन्ट प्लेसमेन्ट गाइड' मा नम्बरको मिलान 'कम्पोनेन्ट चार्ट' मा प्रश्नको कम्पोनेन्टमा।
१ ए - .1..5.6 के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक1B - .001uF सिरेमिक कप्यासिटर १ - - ट्याप गरिएको एयर-कोर कोइल
२ - इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन १ - - 14p एफ सिरेमिक क्यापेसिटर
- - १uF इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर १ - - 15-5० भ्यारीएबल क्यापेसिटर
- -4के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक १ - - १ एन 16 १। डायोड
- -5के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक - - १uF इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर
- -6के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक १ - - PNP २N18 वा MPS2 ट्रान्जिस्टर
- -7के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक 19 - .001uF सिरेमिक कप्यासिटर
- - १०० ओम १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक - - 20 के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक
- - पावर सप्लाईमा सकारात्मक नेतृत्व - - १uF इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर
१० - एन्टेना टर्मिनल 22 - NPN 2N3904 वा MPS3904 ट्रान्जिस्टर
११ - पावर सप्लाईमा नकरात्मक नेतृत्व - - 23 के १/२ वाट कार्बन प्रतिरोधक
१२ - एयर कोर कोइलमा ट्याप गरिएको लेग
ट्रान्समीटरमा जानकारी साथ
L1 एक टेप गरिएको एयर-कोर कुण्डली हो। केवल क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक कसरी L1 निर्माण गरिएको छ हेर्नका लागि।
If तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ र कुनै परीक्षण उपकरण छैन, एक घर बनाइएको वाट मीटर र एक डीभीएम बाहेक, तपाईं मात्र मुख्य AM / FM रेडियोको उपयोग गरेर मुख्य प्रेषण आवृत्ति पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र FM मा स्विच गर्नुहोस् ... त्यसपछि सबै ठाउँमा जानुहोस् सबैभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी ... सबै तरिका बाट रेडियो डायलको बाँया ... जुन M 87 मेगाहर्ट्जको आसपास हो… त्यहि ठाउँमा मैले कुण्डल मिलाएको छु। तपाईंले यसको साथ प्रयोग गर्नुपर्नेछ किनकि ट्रान्समिटरले केवल मुख्य ओस्किलिटिंग फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र राख्दैन, तर हर्मोनिक्स पनि। यदि त्यहाँ केवल एउटा मुख्य ट्रान्समिटि signal् संकेतहरू आयो जुन फ्रिक्वेन्सीबाट आउँदछ जुन तपाईं प्रसारित गर्न चाहानुहुन्छ ... एक व्यक्तिलाई यसलाई फेला पार्न कुनै समस्या हुँदैनथ्यो ... तर हरेक मुख्य संकेतसँग ... त्यहाँ मुख्यका प्रत्येक पक्षमा हार्मोनिक सals्केतहरू छन्। यो एक 'मुख्य' संकेत कब्जा गर्न धेरै निराश हुन सक्छ। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईसँग मुख्य स signal्केत छ, जब वास्तविकतामा, तपाइँ 'मुख्य बन्द' छोटो दायरा संकेत मा केहि प्रकारको spurious मा ट्यून गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यसका बारे व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको छु, र तिनीहरूले भने कि तिनीहरूले यो पनि मुख्य संकेत प्राप्त गर्न को लागी गर्दा फेला पारे। त्यसोभए यो याद राख्नुहोस् ... जे पनि संकेतले तपाईंलाई टाढाको दूरी दिन्छ ... त्यो मेरो साथी, त्यो विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीको 'मुख्य' संकेत (र केही प्रकारको अफ-शूट) हुनुपर्दैन। अभ्यास र धैर्य तपाईंको सहयोगी हात हुनेछ!
इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन... रेडियो ह्याकले यो माइक्रोफोनलाई दुई टर्मिनल जडान र तीन टर्मिनल जडानको रूपमा बेच्छ। दुई टर्मिनल जडान प्रयोग गर्नुहोस्। माइक्रोफोनको हाउजिंगमा जडान भएको पक्ष नकारात्मक पक्ष हो र त्यो टर्मिनल पीसीबीमा जमिनमा जान्छ। अर्को टर्मिनल सकारात्मक पक्ष हो। साथै, जब तपाईं यस वस्तु र तल सूचीबद्ध अन्य वस्तुहरूको लागि रेडियो शैकमा हुनुहुन्छ, it 75 ओम ओभर कोक्स केबलको लगभग एक फिट छान्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यस केबलको साथ तपाईं इलेक्ट्रेट माइक्रोफोनको लम्बाइ 'विस्तार' गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले यो सर्किटरीको नजीक हुनेछ। मसँग right इन्चमा मेरो अधिकार छ, जुन सर्किटरीबाट बाहिर र टाढा हुन्छ र स्पष्टताको सन्दर्भमा उत्कृष्ट कार्य गर्दछ जस्तो देखिन्छ; तपाईको टाउको एकाईबाट अलि टाढा टाढा रहनु भनेर उल्लेख नगर्नुहोस् ताकि फ्रिक्वेन्सीलाई असर नहोस् (तल 'ट्या tank्क सर्किट' हेर्नुहोस्)।
2N3904 वा MPS3904 ट्रान्जिस्टर... यो ट्रान्जिस्टर रेडियो ह्याकमा किन्न सकिन्छ। ट्रान्जिस्टरको प्रत्येक खुट्टाको उचित अभिविन्यासको लागि 'कम्पोनेन्ट प्लेसमेन्ट गाइड' सन्दर्भ गर्नुहोस्। ट्रान्जिस्टरमा सबै खुट्टा काट्नुहोस् १ sold/ an इन्चको सोल्डर गर्न अघि।
2N2907 वा MPS2907 PNP ट्रान्जिस्टर... यो ट्रान्जिस्टर रेडियो ह्याकमा किन्न सकिन्छ। ट्रान्जिस्टरको प्रत्येक खुट्टाको उचित अभिविन्यासको लागि 'कम्पोनेन्ट प्लेसमेन्ट गाइड' सन्दर्भ गर्नुहोस्। ट्रान्जिस्टरमा सबै खुट्टा काट्नुहोस् १ sold/ an इन्चको सोल्डर गर्न अघि।
5-30pF भेरिएबल संधारित्र… रेडियो ह्याकले अब यो कम्पोनेन्ट प्रदान गर्दैन। माउसर इलेक्ट्रोनिक्स, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा, तिनीहरूलाई छ। माउसरको टोल फ्री फोन नम्बर हेर्न W वाट एफएम ट्रांसमीटर वेबपेजमा जानुहोस्। यो दुई उपकरणहरू मध्ये एक हो जुन दोहोरो सर्किट (सामान्यतया 'ट्या tank्क सर्किट' भनेर चिनिन्छ) बनाउँछ। एक विशिष्ट संचारण फ्रिक्वेन्सी को लागी समायोजन गर्न एक भ्यारीएबल संधारित्र आवश्यक छ। ट्या tank्की सर्किट कसरी चल्छ भनेर बुझ्नको लागि यो बुद्धिमानी हुनेछ ... किनकि यो चर चर संधारित्र हो, एकैसाथ एयर-कोर कोइलको साथ तपाईंले प्रयोग गर्नुहुनेछ ... निश्चित ट्रान्समिटि frequency फ्रिक्वेन्सी क्याप्चर गर्नको लागि जुन तपाईं चाहनुहुन्छ। यो तपाईं मा एक छोडिनेछ ट्यून-मा तपाईंको प्रसारण संकेतमा एक प्रापकमा। मात्र यहाँ क्लिक तपाईंको ट्रान्समिटरलाई कसरी ट्युन गर्ने भनेर बुझ्नुहुन्छ र यसलाई पहिलो 'टर्न-अन' को लागि तयार गरिसकेपछि।
'ट्याप गरिएको' एयर-कोर कोइल... यो एक घर बनाएको उपकरण हो र तपाईं द्वारा बनाउनु पर्छ। मात्र यहाँ क्लिक कुण्डल निर्माणको लागि। यो दुई उपकरणहरू मध्ये एक हो जुन दोहोरो सर्किट (सामान्यतया 'ट्या tank्क सर्किट' भनेर चिनिन्छ) बनाउँछ। कुनै विशेष प्रेषण आवृत्तिको लागि समायोजन गर्न कुण्डलको आवश्यक हुन्छ। ट्या tank्की सर्किट कसरी चल्छ भनेर बुझ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ... किनकि यो 'ट्याप गरिएको' एयर-कोर कोइल, सँगै 5--p०pF भेरिएबल क्यापेसिटरको साथ, तपाईं प्रयोग गर्नुहुनेछ ... विशेष ट्रान्समिटिting फ्रिक्वेन्सी क्याप्चर गर्नको लागि। यो तपाईं मा एक छोडिनेछ ट्यून-मा तपाईंको प्रसारण संकेतमा एक प्रापकमा। मात्र यहाँ क्लिक तपाईंको ट्रान्समिटरलाई कसरी ट्युन गर्ने भनेर बुझ्नुहुन्छ र यसलाई पहिलो 'टर्न-अन' को लागि तयार गरिसकेपछि।
1N914 डायोड... यो उपकरण रेडियो ह्याकमा किन्न सकिन्छ। डायोडमा पोलारिटीहरू अवलोकन गर्नुहोस्। क्याथोड (त्यो डायोडको नकरात्मक पक्ष हो) भूमिमा जान्छ।
4.7pF फिक्स्ड डिस्क क्याप्यासिटर... यो एक गैर-ध्रुवीकरण गरिएको क्यापेसिटर हो, जसको अर्थ यो होइन कि प्लेसमेन्टको लागि कुन खुट्टा प्रयोग गरिन्छ। मात्र निश्चित गर्नुहोस् कि एउटा खुट्टा MPS2907 को emitter मा जान्छ र अर्को खुट्टा MPS2907 को कलेक्टरमा जान्छ। खुट्टाको दूरी राख्नुहोस् १/1 इन्च भन्दा माथिको ट्रान्जिस्टरमा राख्नुहोस्।
२K के प्रतिरोधक... यो विशेष प्रतिरोधक रेडियो ह्याकमा भेट्टाउने छैन। त्यसकारण, a..5.6 के र २२ के रेसिस्टर खरीद गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई पीसीबीमा श्रृंखलामा राख्नुहोस्। ओहमेज पर्याप्त नजिक हुनेछ। मैले यस विधि प्रयोग गरेर अडियोमा परिवर्तन भएको थाहा पाइन।
एन्टेना... मैले यस एकाईमा चार देखि पाँच फिट एन्टेना प्रयोग गरेको छु र योसँगै राम्रोसँग विकिरण भयो। तपाईं रेडियो श्याकबाट चार वा पाँच फुटको टेलिस्कोपिक एन्टेना खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को विकल्प दुई स्ट्रिट आउट आउट कोट ह्याgers्गरहरू सँगै बेच्न सकिन्छ र त्यसपछि feet फिटसम्म काट्न सकिन्छ।
र अन्तमा ...
Once तपाईंले युनिट बनाउन सिध्याइसक्नुभयो, यो लगभग M 88 मेगाहर्ट्जमा ट्युन हुन तयार छ। यसको मतलब यो एफएम प्रसारण ब्यान्डको सब भन्दा कम अन्त्य हो। एउटा पोर्टेबल एफएम रिसीभर पत्ता लगाउनुहोस् र यसलाई लगभग M 88 मेगाहर्ट्जमा ट्यून गर्नुहोस्। त्यसपछि ट्रान्समिटरबाट करीव feet० फिट एफएम रिसीभर रेडियो स्थिति। भोल्युम रिसीभरमा करिब आधामा बदल्नुहोस्। त्यसो भए ट्रान्समिटरमा तपाईंको भ्यारीएबल क्यापेसिटर समायोजित गर्न सुरु गर्नुहोस्, यसमा कुरा गरिरहँदा, तपाईंको रिसिभरमा तपाईंको आवाज उठाउन। जब तपाईं आफ्नो विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीमा ट्युनिंगको साथ परिचित हुनुहुन्छ, र जस्तो देखिन्छ योसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, एक मित्रसँग सँगै आउनुहोस् र देश वा कुनै व्यापक खुला क्षेत्रमा जानुहोस् र इकाई कति टाढा प्रसारण गर्न सक्छ हेर्नुहोस्। तपाईं माइक्रोफोनमा कुरा गर्दा ट्रान्समिटरको साथमा बस्नुहुन्छ र तपाईंको साथीले बिस्तारै तपाईंबाट टाढा हिड्दै लैजान्छ रसीभरलाई समातेर। उसलाई आफ्नो पाखुरा उठाउनुहोस् भन्नुहोस् ... जब तपाईंको आवाज अब सुन्न सकिदैन। त्यसोभए तपाईको इकाईमा कति टाढा प्रसारण हुन्छ भन्ने बारे तपाईसँग स्पष्ट विचार हुनेछ। ट्रान्समिटर र रिसीभरको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको अवरोधहरू 'रेखाको दृष्टिबाट' बाहिर राख्नुहोस्। मलाई एउटा चिठ्ठी पठाउनुहोस् र मलाई के भयो मलाई थाहा दिनुहोस्। तिम्रो सबै चीज राम्रो होस् भन्ने मेरो कामना। र त्यसैले मेरो साथी ...
... परियोजना सुरु गरौं!